SOBA: Fakkiiwwan kun miseensoonni ABUT basaasaaf miila-dhabaa fakkaatanii qabamuu isaanii hi argisiisu | Addis Zeybe - Digital Newspaper
SOBA: Fakkiiwwan kun miseensoonni ABUT basaasaaf miila-dhabaa fakkaatanii qabamuu isaanii hi argisiisu
Gaafa guyyaa Onkololeessa 25, 2014 ALI Fuulli Fesbuukiin hordoftoota 59,000 ol qabu maxxansii Afaan Amariffaatin “miseensoonni ABUT basaasaaf miila-dhabaa fakkaachuun yeroo socha’an qabamaniiru..” jachuun suuraa lama wajjin wal qabsiisuun maxxansee ture.
Maxxansiin kuniis hanga baruun kun bahuutti yeroo 420 ol qoodameera.
Onkolooleessa 23 irra jalqaabee Mootumman Federalaa Itoophiyaan Labsii yeroo muddamaa ji’oottan jaha dhufaniif labseera. Magaalaa gudditii Finfinnee dabalee naannooleen hundi jiraatoota isaanif ija isaanii olaafi ganda isaanii irratti aka gatan fi wanta shakisu jiranaan qaama ilaaluf aka himaan hubachiisaniru.
HaqCheck madda suuraalee dura maxxanfamee qorateera. Fajkkiiwwan kunis yeroo jalqabaaf fuula beekkamaaFessbuukii Kominikeshinii Dhimma Mootummaa Aanaa Hadiyyaa irratti sa’aa 3 duransee maxxanffame. Innis manoota lama mila-dhabaa fakaatanii kan kadhachaa turaniifi boodas too’anna jala ooluu isaanii hima.
Dabalataanis HaqCheck ofisara kominikeeshinii aanaa Hadiyyaa Obbo Yodiidiyaa Tasfayee dubbiseera. Innis gabaasa Fuula fesbuuki kominikeeshinii aanaa Hadiyyaan gabaasee nuuf mirkaneesera.
Fuulli Fesbuukiin Gabaasa soba kana facaase kun yeroo duraa maqaan isaa “Mesay Mekonnen - ESAT” kan ta’ee yoo ta’u yeroo booda maqaa isaa gara “Click Dessie” jijirera.
Kanaafuu Postiin kun miseensonni ABUT basaasaaf miila-dhabaa fakkaatanii yeroo socha’an qabamuu isaanii waan hin ibsineef HaqCheck SOBA Jadhee ramadeera.